Leviticus 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
11 Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: 2 “Monka nkyerɛ Israelfo sɛ, ‘Asase so mmoa nyinaa, nea mubetumi awe ni:+ 3 Mubetumi awe aboa biara a ne nan mu apae na opuw wesaw.+ 4 “‘Mmoa a wopuw wesaw anaa wɔn nan mu apae a ɛnsɛ sɛ mowe ni: Monnwe yoma, efisɛ opuw wesaw de, nanso ne nan mu mpaee. Ne ho ntew mma mo.+ 5 Afei nso monnwe atwaboa,+ efisɛ opuw wesaw de, nanso ne nan mu mpaee. Ne ho ntew mma mo. 6 Monnwe adanko+ nso, efisɛ opuw wesaw de, nanso ne nan mu mpaee. Ne ho ntew mma mo. 7 Bio nso monnwe prako,+ efisɛ ne nan mu apae asi de, nanso ompuw nwesaw. Ne ho ntew mma mo. 8 Monnwe wɔn nam, na munnso wɔn afunu mu.+ Wɔn ho ntew mma mo.+ 9 “‘Nsu mu mmoa a mubetumi awe ni:+ Asubɔnten anaa po mu aboa biara a ntɛtɛw ne abona wɔ ne ho+ de, mubetumi awe. 10 Nanso po anaa nsu biara mu mmoa manyamanya anaa nsu mu akra ateasefo a wonni ntɛtɛw ne abona de, ɛyɛ mo akyide. 11 Ɛyɛ mo akyide ankasa. Monnwe bi,+ na wɔn funu nso, munkyi koraa. 12 Biribiara a ɛwɔ nsu mu a enni ntɛtɛw ne abona yɛ mo akyide. 13 “‘Ntuboa a ɛsɛ sɛ mukyi ni.+ Monnwe wɔn nam. Wɔyɛ akyide: Ɔkɔre,+ ɔkɔrebia, opete tuntum, 14 ne ɔkom ne ɔsansa,+ ne wɔn a wɔn su te saa, 15 ne kwaakwaadabi+ ahorow nyinaa, 16 ne sohori,+ ɔpatu, asomfena, ne akorɔma, ne wɔn a wɔn su te saa, 17 ne ɔpatubiaa, po so anene, ɔpatu asotenten,+ 18 ne suborɔkokɔ, pokupoku, ne opete,+ 19 ne asukɔnkɔn ne asunoma ahorow a wɔn su te sɛ eyinom, ne asɔkwaa ne ampan.+ 20 Ntuboa manyamanya a wotumi nantew wɔn nan anan so yɛ mo akyide.+ 21 “‘Ntuboa manyamanya a wotumi nantew wɔn nan anan so yi na monwe, wɔn a wɔwɔ nan a wɔde huruhuruw fam. 22 Wɔn mu nea mubetumi awe ni: Mmoadabi ahorow nyinaa,+ ne aketekre ne mmebɛw+ ahorow. 23 Ntuboa manyamanya foforo a wɔwɔ nan anan yɛ mo akyide.+ 24 Eyinom begu mo ho fĩ. Obiara a obeso wɔn funu mu no ho begu fĩ akosi anwummere.+ 25 Na obiara a ɔbɛsoa wɔn funu no, ɛsɛ sɛ ɔhoro+ n’atade, nanso ne ho begu fĩ akosi anwummere. 26 “‘Sɛ aboa bi nan mu apae nanso ɛmpae nsii, na ompuw nwesaw a, ɛyɛ mo akyide. Obiara a obeso ne mu no ho begu fĩ.+ 27 Mmoa a wɔnantew wɔn nan anan so no ho ntew mma mo. Obiara a obeso wɔn funu mu no ho begu fĩ akosi anwummere. 28 Obiara a ɔbɛsoa wɔn funu+ no, ɛsɛ sɛ ɔhoro n’atade,+ nanso ne ho begu fĩ akosi anwummere, efisɛ wɔn ho ntew mma mo. 29 “‘Mmoa a wɔwea fam a wɔn ho ntew ni:+ Ahweaa, aperekesima,+ ne ɔketew, ne wɔn a wɔn su te saa, 30 ne ɔdannena, ɔmampam, bɔmɔte, anhwea-ketew ne ɔbosomaketew. 31 Saa mmoa a wɔwea fam+ yi ho ntew mma mo. Obiara a obeso wɔn funu mu no ho begu fĩ akosi anwummere.+ 32 “‘Biribiara a wɔn mu biara bewu atɔ so no ho ntew, ade a wɔde dua+ asen oo, atade oo, nhoma+ oo, atweaatam+ oo, ɛho ntew. Biribiara a wɔde yɛ adwuma no, ɛsɛ sɛ wɔde hyɛ nsu mu, nanso ɛho begu fĩ akosi anwummere ansa na ɛho atew. 33 Na kuku+ biara a wɔn mu bi bewu atɔ mu no, biribiara a ɛwɔ mu no ho ntew, na ɛsɛ sɛ mobɔ no.+ 34 Sɛ nsu fi mu gu aduan biara so a, ɛho ntew, na biribiara a obi bɛnom wom no nso ho ntew. 35 Biribiara a wɔn funu bɛtɔ so no ho ntew. Fononoo oo, nea ahina si so oo, ɛsɛ sɛ wɔbɔ no. Ɛho agu fĩ, na ɛho ntew mma mo. 36 Nsuti ne abura a nsu wom de, ɛho bɛkɔ so atew, nanso nea obeso wɔn funu mu no ho begu fĩ. 37 Sɛ wɔn funu tɔ aba bi a wɔrebedua so a, ɛho da so ara tew. 38 Nanso sɛ ɛba sɛ wɔde nsu gu aba no so na aboa a wawu no ho biribi bɛtɔ so a, ɛho ntew mma mo. 39 “‘Sɛ mmoa a wɔde ama mo sɛ aduan no bi wu a, nea obeso ne funu mu no ho begu fĩ akosi anwummere.+ 40 Obiara a ɔbɛwe+ aboa a wawu no fã biara no, ɛsɛ sɛ ɔhoro n’atade, nanso ne ho begu fĩ akosi anwummere. Na obiara a ɔbɛsoa ne funu no nso bɛhoro n’atade, nanso ne ho begu fĩ akosi anwummere. 41 Na aboa biara a ɔwea fam yɛ akyide.+ Ɛnsɛ sɛ mowe. 42 Ɛnsɛ sɛ mowe aboa biara a ɔwea ne yafunu so+ anaa ɔnantew ne nan anan so anaa aboa biara a ɔwɔ nan bebree a ɔwea fam, efisɛ ɛyɛ akyide.+ 43 Mommfa mmoa a wɔwea fam yi nnsɛe mo kra, na mommfa nngu mo ho fĩ na mo ho anhura.+ 44 Mene Yehowa mo Nyankopɔn;+ montew mo ho na monyɛ kronkron,+ efisɛ meyɛ kronkron.+ Enti mommfa mmoa a wɔwea fam nngu mo kra ho fĩ. 45 Mene Yehowa a odii mo anim fii Egypt asase so de kyerɛe sɛ mene mo Nyankopɔn+ no. Monyɛ kronkron,+ efisɛ meyɛ kronkron.+ 46 “‘Eyi ne mmara a ɛfa mmoa nyinaa ho, ntuboa, akra ateasefo a wɔwɔ nsu mu,+ ne akra a wɔwea fam manyamanya nyinaa. 47 Eyi bɛma nsonsonoe+ abɛda nea ɛho tew ne nea ɛho ntew ntam, ne aboa a mubetumi awe ne nea muntumi nwe ntam.’”